UGAAR AH DUMARKA: 5 Waxyaabood oo ku saabsan ninkaaga ha u sheegin saaxiibadaa | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»UGAAR AH DUMARKA: 5 Waxyaabood oo ku saabsan ninkaaga ha u sheegin saaxiibadaa
Aayaha editor Send an email February 21, 2019
Waan la sheegay in xeerka gabdhaha uu yahay inaysan sirta kala qarsanin balse waa inaad fahamtaa inay jiraan waxyaabaha qaarkood oo ku saabsan xiriirkaaga inaadan kala hadlin saaxiibadaa.
Akhri 5 waxyaabood oo ku saabsan ninka oo ay tahay in haweeney kasta aysan u sheegin saaxiibadeed.
Waligaa ha u sheegin saaxiibadaa wax ku saabsan raaxada ama galmada ninkaaga. Wax wanaagsan maahan waxayna kuu keeni kartaa dhibaatooyin. Haddii aad u sheegto saaxiibadaa sida uu u wanaagsan yahay ninkaaga, waxaa suurtagal ah inay isku dayaan inay kula qeybsadaan, haddii aad u sheegtid xumaantiisana waxay u arkayaan midaan waxba galin. Iska ilaali inaad heerka galmada ninkaaga kala hadasho saaxiibadaa ama qaabka uu kuugu raaxeeyo.
Waligaa saaxiibada hakala hadlin qaladaadka hore iyo kuwa hadda uu sameeyo ninkaaga. Ma u maleyneysaa in ninkaaga ay wax caadi ah la noqon doonto haddii uu ogaado taas? Haddii aad rabtid in saaxiibadaa ku qiimeeyaan oo ku qadariyaan, hakala hadlin qaladaadka ninkaaga.
Haweenka qaarkood waa kuwo warbixintaan la wadaaga saaxiibadood dhab ahaantiina qalad. Inaad dhaqaale xumada seygaaga heysata kala hadasho saaxiibadaa waxay isaga ka dhigeysaa midaan awood lahayn ama liita.
Waxaa surtagal ah inay ku dhibayaan dabeecadihiisa xun balse kalahadalka arrintaas saaxiibadaa ma xalineyso dhibaatada balse waxaad seygaaga ku dhex ceebeysay saaxiibadaa. Ka caawi inuu iska jaro dabeecadaha xun intaad caalamka u sheegi lahayd.
Marka uu isfaham waa idinka dhexeeyo adiga iyo ninkaaga, si wadajir ah uga shaqeeya inaad u xalisaan. Waa xiriirkaaga oo mana ahan mid ay tahay in saaxiib walba oo aad leedahay uu ogaado muranka adiga iyo ninkaaga idinka dhexeeya.
Inaad saaxiibadaa kala hadasho muranka idinka dhexeeya adiga iyo seygaaga waa mid keeneysaa in saaxiibadaa ay ixtiraam yar u hayaan seygaaga, maadaama aad adiga u xumeysay.
5 common reasons a guy doesn't reply to your texts